MAGAC WEYN IYO MASKAX WEYD AH !!!!!!!!!! DAD DHISA DABEEDNA DAWLAD:
Faisal Isse Suleiman.
Barqanimadii talaadadii, 5 march 2003 ayaan u banbaxay inaan booqdo madasha shirka dib u heshiisiinta soomaalida , ee ku taal; duleedka magaalada Nairobi . intii aan ku jiray safarkii gaabnaa ayaa darawalkii baabuurkii aan la socday I weydiiyey su’aalo ay ugu cuslayd ,waxaad tihin hal qabiille maxaaad isu dilaysaaan, idiinkoon waliba haysan canaasirta aadnaha kala qoqobta oo kal qaybisa, sida kala duwanaanshaha qabiilka ,diinta iyo midbaka . intaan u jawaabin ayaan waxaan sikadis u dhexgalay sheeko kale oo naga shuqlisay tii hore. Markii aan gaaray goobtii aan u soo qasday, ayaan haddiiba dheehday goobta muqaalka quruxda badan ee loo qoondeeyay in ay soomalidu ku xajoodaan..
Madasha marti galinta maryoolaydu waxay ahayd meel magac iyo muuqaalba san. Waa meel ah kuliyad wax barasho, oo si heer sare ah u nidaamsan, ardayda [college] ka ayaa iyagoo kooxo kooxo ah si degen u mushaaxayey waadooyinka quruxda badan ee goobtaas.
Saaxiibkay Ibraahim Maxameddeeq oo safarka igu weheliyey ayaa farta iigu fiiqayey dadka magacdheer ee soomalaiyeed siiba qabaqabalayaasha dagaalka , markasta oo aan ogaado in ruuxaasi yahay hebel oo aan horay u maqalay magaciisa, muuqiisan hada u jeedo waxan isku dayayey inaan ogaado maskaxdiisa, waxaana ogaaday in badankoodu ku sifoobeen MAGACWEYN IYO MASKAX WEYD AH.
Ka sokow dagaal oogayaasha dadka caadiga ah ee shirka ka soo qayb galay ,waxay ahaayeen duul karaamiyo colba leh , inkastoo ay ku jiraan qaar heer magaalinama iyo xadaarada dawladnimada casriga ah aan dheef weyn kala socon hadana meesha lagama saari karo in ay ku jireen kuwo leh aqoon wanaagsan oo meesha ka baxda marka ay qabyaaladu canalwalaynayso.
Ka qayb galayaashu waxay u bandnaayeen kuwo calashada maydhaxda qaadaka , dhaqdhaqaaqa cibaada xagga diinta ayaa aad ugu yar ama gaabis ku ah shirka iyadoo mudadii aan jogay aanan maqalin wax diinta khuseeya, kol ay ku tahay aadanka salaadaha , taas oo aad ugu duwan xaafada soomaalidu ku badantahay ee Eastleigh oo cibaadada aad loogu dadlaalo adanka masaajiduna isu baxaan waqtiyada salaada.
Ibraahin Maxameddeeq ayaa mar aan arinkaas wax ka weydiiyey ii sheegay in xataa eldoret oo shirku horey ugu socon jiray ay ka darayd xaruntan cusub ee Bagathi oo dad badan ay afuraayeen dharaarihii ramadaanka.
Dadka shirka ka soo qayb galay badankiisu ma cadeyn karaan meesha soomaalidu ka bugto iyagoo eeda dhabarka u saaray meelo aysan khusayn waxayna taasi i xasuusisay erayadaydii ahaa : GOCASHADIYO TAAHIYO, HALKII CUDURKU KAAGALO ,MARKAAD GARAN KARAYSAA, DAAWADA LA GAARAA.
Madasha shirka waxaa ka maqnaa eragada doooxad juba iyo kuwa dawlada ku meel gaarka ah, mar aan wax ka wey diiyey kuwa ugu dhaw dhaw kooxahaas waxay ii sheegeen in ay qawadeen cadaalda shirka, mana aha iyaga oo kaliya cidda ka dayrisay cadalada ee waxaa iygun taas la qaba kuwa kale oo hooska tooxaynaya . waxyna taasi ina ku soo bya xigmadii gabayaagii weynaa ee Cali Dhuux ee ayhad :RAG CADAALAD WAAYAA SIDII CAWSHII KALA YAACYE:
Ergada ka socota Puntland oo shir ku lahaa halkaas ayaa mid ka mid ahi ii sheegay mar aan wax ka weydiiyey waxay ka shirayeen in ay iyagu yihiin kuwa kaliya ee nidaam ku salyesan kuna soo wada baxay ,haddii sirku bur burana haytsa meel nidaam iyo maamul leh oo ay ku noqdaan, sidaas darted ay waajib tahay in ay mar walab ka tashadaan wixii soo kordha.
Goobta ay degan yihiin eragada puntland ayaa ahayd meesha ugu mashquulka badan shirka oo dhan, waayo waxaan arkayey dad shayb iyo shabaaba leh kana kooban qaybaha bulshada soomaalida oo galaa-baxaya , waxaana lagu macneyn karaa inuu ka socday olole siyaasadeed iyo loolan adag, dhinaca kale dad door ah oo isugu jira ka qayb galayaasha iyo dad kale oo caadiya ayaa aaminsan in wadamo ka tirsan safka hore ay mijaxaabinayaan habsami u socodka hawlaha shirka iyagoo si khiyaali ah dhinaca u saraya qaar ka tirsan kooxaha, waxaa kaloo muuqatay fikrada ka dhex jirta shirka oo ku doodaysa in qaar katirsan wadamada IGAD aysan kal iyo laab ka ahayn dawladnimo laga yagleelo gayiga soomaaliyeed, taas oo ina xasuusin karta , gabaygiii Qamaan Bulxan ee ay ku jiratay xikmadan;
BAADIDA NIN BAA KULA DAY DAYA DAALA KAA BADANE OON DOONAHAYN INAAD HESHAA DAA’IN ABIDKAAYE ,
DADKUNA MOODI DUUL WADA DHASHOON WAX U DAHSOONAYANE.
Haddii aan dib u raacno taarikhda waxaan arki karaa farqiga udhexeeya qabqabalyaasheena iyo nimankii ka talin jirya Earope quruuntii dhexe ee loo yaqaanay middle ages 400-1500 AD Ciise dabadii .nimankaas oo loo yaqaaney warlods waxay ahaayeen kuwo noloshopda oo dhami ku xiran tahay dagaal oo qoriga caaradiisa quuta , dhinaca kale maysan ahayn sida dagaal oogayaasheena oo kale kuwo baabiya dhaqanka ,qiyamka bulshada iyo waxyaabaha damiirku ku shaqeeyo , waxayna worlds kii yurub ahaayeen kuwo ku dadaal hurumarinta ummadooda .
Waxaa kale oo tusaale aan u soo qaadan karaa, imbridooriyadii ugu weynayd ee calamaka soo marta ee loo yaqaanay [Mongol Empire] ee jirtay intii dhexaysay 1100-1368 ,ibridoorkii ugu weynaa ee soomary wuxuu aahaa kii lagu magcaabi jiray Genghis Khan wuxuuna ahaa nin aad u naxariis daran oo majixinjixe ah kaas oo dadkiisa oo ahaa reer baadiye caga cad ka dhigay dadka ugu dhulqabsiga badan taaariikhda aduuunka. Waxaana intii ay monglosku dagaalamayeen hoosyimid xukunkooda wadmada, bariga yurub , China Korea, Mongolia Turkstan , Armeina , Russia, Barma, Veitnam, Thailand iyo Turky .
Inkastoo Genghis Khan uu ahaa mid ka mid ah dadka aduunka ugu arxanka daran, hadana wuxuu kaga fiicnaa dagaal ogayaasheena, isagoo lahaa dhinac suuban waayo waxaa dagaalkiisa la socday horumar aduunka raadeeyey, waayihii uu xukunka hayey waxaa caalamka ku fiday farsamooyin casriya iyo hindisaad waxana ka mid ah waxyaalahii uu Yurub ku soo kordhiyey farsamaadii ugu danbeysay ee Reer shiine sida waraaqaha wax lagu qoro , madbacadaha, jiheeyaha iyo waxyaalo kale oo badan.
Dhinaca kale dagaal oogayaasha soomalidu way ka duwan yihiin jabhadaha kale ee caalamka xataa kuwa afrikaanka ahi kuma raacsana wax duminta waayo markii ay falaagooyinku qabasadeen, wadmada Ethopia , Ruwanda , Burindi , DRC iyo kuwo kale oo badan waxay falaagooyinkaasi sii joogteeyeen habkii iyo hanaankii dawliga ahaa siday doonba wax ha u badaleene.
Laakiin kuwii soomalidu maysan ku dadaalin qiimaha aadanaha waxyna shacabkii ku xukumeen madaxaa ha ku furto.
Waxaana jira fikrado had iyo jeeraale ku dooda in aysan qabqablayaasha dagaalka yihiin budhcad damacsan in ay ummada waligood madax fursho u haysataan iyagoo ismooday ina ay ka raysteen dawladnimadii ayna ka go’antahay ku tumashada dhaxalka qaranka, waxaana marag ma doonto ah ina ay idaacadaha ka sheegeen in ay sheekaduba tahay kubbada midba mar raynayo . waxyana ku soo biyo dhacaysaa eraydadii qoraha faalada ee ahaa sidan;
DHALAANKUBA MAR BAY MULAC
IYAGOON U DHAADAYN .
INTA AY KU DHEELAAN
KA DHIGAAN DHALFIIHAHA,
MA YAQAAN DHIWLOWGEE
DHIIBAY KA JOOGTAA
TAA WAXAA KA DHIGANOO
MARNA AANAN DHAAFAYAYN
DHAMAC OO GAYAASHAAN,
DHULKII AAN LAHAYNIYO
DHAQAN IYO DHAQAALIYO
DAMIIRKII DHISNAAN JIRAY
INTA AY KU DHEELEEN
DHAYI WAAYEY DABADEED
DHAAWACAY U GEYSTEEN.
Dagaalogayaashu waxay ku sifoobeen wax aan iyaguna isjeclayn dadkuna jeclayn markay ku guuldareysateen in ay in yarana bulshada u muujiyaan in ay wadeen is badal markii ay damceen in ay meesha ka saaraan xukuumadii hore ay waxna keeni waayeen ,maatadiina dubtaan waxaana taas inoo bidhaamin kara eraydii Maxamed Xaashi Dhamac [Gaariye] markuu lahaa sidan,
NIN WAX DOONAYOON WADIN WAX KALUU KA DOOR BIDO.
WUXUU DOONAYAAN JIRIN.
Waana saase waxay noqdeen kuwo saxiixidu u fududahay dhaqangalintuna ku adag tahay. Waayo iyagoo saxeexay xabad joojin intii lagu jiray shirka wali loo fadhiyo ayey hadana xabadu gees kasta oo Soomaaliya ah ka qaraxaysaa.
Hadaba waxaa is wediin leh xal makeeni karaan dagaaloogayaal iyagu ah qaybta ugu weyn ee mashaqada soomaaliya mase keenayaan ? mase ka go’an tahay beesha caalamka nabadanynta soomaaliya iyo in dawlad laga yagleelo geyiga soomaalida ? haddise ay ka go’an tahay maxay arintu gaabis u tahay ? mase dhicikartaa in caalamku soomaalida u sameeyo qorshihii lamagac baxay [ Marshal plan] ee maraykan ku ugu talagalay dib u dhiska Earope, ka dib dagaalkii labaad ee aduunka, haddiiba ay dhici karto in aduunku dadaal u wado soomaalida ,maxay waa jib u tahay in dagaal oogayaal danbiile yaal dagaal ah la wada-hadalsiiyo iyadoo ahmiyada la siin waayey oo dhabarka loo jeediyey qaybihi kale ee bulshada.
Su’aal kale oo meesha ku jirta ayaa ah hadiiba ay dhacdo in dawlada loo dhiso soomaalida ma hanankartaa ? ,mise wali uma bisla ee waa in horta DAD LA DHISAA SI AY AY DAWLAD U SO DHISAAN? oo arinku waa dad dhisa ee dawlad ha dhisina si aysan u burburin sidii tii hore ee ha la gaaro xilli ay hanan karayaan..
Qabqablayaasha xalka looga fadhiyo iyo cidda ugu fadhidaba , miysan kusifoobayn , erayadii Gaariye ee ahaa sidan:
NIN DAWEE LA LEEYAHAY DANBI U BADH LEEYAHAY
XALKA DOON LALEEYAHAY ISAGAY UDARANTOO
DAARAANTA MILILKA LEH INUU DAARO MA OGOLA.
Gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa jira qayb ka mid ah bulshada oo caadeystay in ay wax walba is hortaagaan iyaguna aan xal wadin kuna sifoobayn falsafsada caanka ah ee ah QOFKII AAN XAL WADIN WUXUU KA MID YAHAY MUSHKILADA iyo waliba xigmadii ku jirtay gabaygii Cali Dhuux ee hayd :
WAAYEEL GUDOONSADAY TASHIGA WAA GORGORIYAAYE.
GAGiSE WAA XUNTAHAY XAAJADII GARANSHO WEYDAAYE.